ပုဂံ - ညောင်ဦး - ပုပ္ပါး
၃ ညအိပ် ၄ ရက်
Golden Star Travels & Tours Co.,Ltd
Departure Date Jan , 2020 Return Jan , 2020
Day 1 ရန်ကုန် - ပုဂံ
Day2ပုဂံ - ညောင်ဦး
Day3စွယ်တော်လေးဆူ - ပုပ္ပါး
Day4ရန်ကုန်
ရန်ကုန်မြို့စုရပ် မှ ည(၈)နာရီတွင် စတင်ထွက်ခွါပါမည်။ (၃၉)မိုင်ယာဥ်ရပ်နားစခန်းတွင် ခေတ္တရပ်နားပြီး ပုဂံသို့ခရီးဆက်ပါမည်။လမ်းခရီးတစ်လျောက်လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် ရပ်နားပေးပါမည်။
Day2ပုဂံ - ညောင်ဦး -/-/
မနက်ခင်းပိုင်းတွင် ပုဂံသို ့ရောက်ရှိပြီး ဒေသစားသောက်ဆိုင်တွင် မျက်နှာသစ်ကိုယ်လက်သန် ့စင်ပြီး မနက်စာသုံးဆောင်ပါမည်။
ထို ့နောက် ပုဂံနှင့်ညောင်ဦးမြို့ရှိနာမည်ကြီးဘုရားစေတီများဖြစ်သည့် မနူဟာဘုရား၊နန်းဘုရား၊မြစေတီ၊ရာဇကုမာရကျောက်စာ၊မြင်းပါရဂူပြောက်ကြီး၊ကန်တော့ပုလ္လင်၊သဗ္ဗေညု၊အလိုတော်ပြည့် စသည့်နေရာများကို သွားရောက်လေ့လာပါမည်။
ထို ့နောက် Local Restaurant တွင် နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီး Hotel Check In ၀င်ကာ ခေတ္တအနားယူပါမည်။ညနေခင်းပိုင်းတွင် အခြားနာမည်ကြီးဘုရားစေတီများဖြစ်သည့် အာနန္ဒာဘုရား၊ထီးလိုမင်းလို၊ဓမ္မရံကြီး၊စူဠာမုနိပုထိုးတော်ကြီး စသည်
တို ့ကိုယ်ဖူးမျှော်ပြီး နေ၀င်ကုန်းမှ ပုဂံမြို ့နေ၀င်ဆည်းဆာ အလှကိုယ် ကြည့်ရှူခံစားကြပါမည်။ထို ့နောက် ညစာသုံးဆောင်ကာ Hotel တွင်တစ်ညတာ အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
မနက်(၃)နာရီခန့်တွင် စတင်ထွက်ခွာပြီး ဧရာ၀တီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိ တန့်ကြည်တောင်စွယ်တော်မြတ်စေတီကို သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။ထို့နောက် သို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။ထို့နောက်တူးရွင်းတောင်စွယ်တော်
မြတ်စေတီနှင့်ရွှေစည်းခုံဘုရား သို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။ထို့နောက် နေ့လည်စာကိုယ် LOCAL RESTAURANT တွင် သုံးဆောင်ပါမည်။နေ ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ပုပ္ပါးတောင်ကလပ် သို ့ခရီးဆက်ပါမည်။ပုပ္ပါးသို့ရောက်ရှိလျှင် တောင်ကလပ်
စေတီတော်အားတက်ရောက် ဖူးမျှော်ပြီး ရန်ကုန်အပြန်ခရီးကို စတင်ပါမည်။ကျောက်ပန်းတောင်းရှိ စားသောက်ဆိုင်တွင် ညစာသုံဆောင်ပါမည်။
Day4ရန်ကုန် -/-/
ရန်ကုန်စုရပ်သို့ မနက်ခင်းအစောပိုင်းတွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး ခရီးစဥ်ပြီးဆုံးပါမည်။
33 Seater Bus ×2Meals Not Mentioned In The Itinerary
Meals Mentioned In The Itinerary (B/L/D) Tips For Drivers And Guide
local Tour Leader Personal Expenses
Transfer Charges Extra Charges Of Visiting Places Not Mentioned In Itinerary
Coach Hotel Price / Pax ( MMK )
2 × 33 Seaters Famous Hotel 115,000/-
2 × 33 Seaters
Sincere Smile Hotel 115,000/-
Bagan View Hotel 105,000/-
50% deposit of the total charge need to be settled 45 days prior to the travel date to secure the booking.
The balance need to be paid on the departure date before departure.
If the deposit has not been received journey To Myanmar Travel & Tours has the right to cancel the booking.
All payment should be made in cash or bank transfer.
30 - 15 days before departure date - 75% of the price will be charged
During the trip Non - refund
Rental Reservation should be made directly to;
Office Address: No.23 , 1st Floor , Wuttkyaung St , Yekyaw Ward , Pazuntaung Tsp,Yangon.
TEL: 018610721, 09 8950 700 65, 09 8950 700 64, 09 8950 700 63